2021 Summer Institute - Fikambanan'ny Ivotoerana manoratra iraisam-pirenena
2021 IWCA Fihaonambe isan-taona (20-23 Okt)
Ivotoerana fahavaratra 2021
2021 IWCA Fiaraha-miasa @ barotra
Date: Jona 14-18, 2021
IWCA Summer Institute amin'ity taona ity dia azo fintinina amin'ny teny efatra: virtoaly, manerantany, malefaka ary azo idirana. Miaraha aminay amin'ilay Ivotoerana fahavaratra voalohany natao tamin'ny 14-18 Jona 2021! Ny SI dia fotoana nentim-paharazana mba hialan'ny olona isan'andro sy hivondronany ho toy ny antokon'olona, ​​ary raha miankina aminao ny halaviran'ny andavan'andro, dia ho finaritra ny andiany amin'ity taona ity ny fotoana ahafahana mifandray amin'ny matihanina amin'ny ivon-toerana manoratra manerana an'izao tontolo izao. Ny atrikasa rehetra dia hatao amin'ny alàlan'ny sehatra mivantana sy mivantana mivantana ary ho afaka hamitana tsy misy hatak'andro. Ankoatr'izay, noho ny vidiny ambany fampiantranoana ny SI saika, 400 $ monja ny fisoratana anarana (matetika, 900 $ ny fisoratana anarana), izay mahatonga ny SI amin'ity taona ity ho ara-toekarena faran'izay tsara. Tahaka ny tamin'ny lasa, ny mpandray anjara dia afaka miantehitra amin'ny traikefa ao anatin'izany ny atrikasa malala-tanana, ny fotoanan'ny tetikasa tsy miankina, ny iray sy ny iray ary ny tarika kely, mampifandray ireo mpikambana ao amin'ny tarika, ary ny lalao misy tanjona. Fandaharam-potoana ho avy.
Daty nahaterahana: 23 aprily tamin'ny hamaika.org. Ny fisoratana anarana dia voafetra ho an'ireo mpikambana 40 voalohany izay mangataka.
Fanolorana fanolorana: $ 400.
Famatsiam-bola Assistance: Misy ny famatsiam-bola voafetra ho an'ireo mpikambana izay mangataka amin'ny 23 aprily ary milaza ny filan'izy ireo.
Refund Policy: Ny famerenam-bola feno dia hisy hatramin'ny 30 andro alohan'ny hetsika (14 Mey), ary ny antsasaky ny famerenam-bola dia afaka 15 andro alohan'ny hetsika (30 Mey). Tsy hisy famerenam-bola aorian'izay.
Azafady mba alefaso imailaka ny fanontaniana amin'ny Kelsey Hixson-Bowles or Joseph Cheatle.
Kelsey Hixson-Bowles (University of Utah Valley) niasa tao amin'ny foibe fanoratana nandritra ny iraika ambin'ny folo taona, nanomboka ho mpitaiza mpiara-mianatra. Mpampianatra mpanampy amin'ny literatiora sy ny firafitra izy ankehitriny ary koa ny talen'ny mpampianatra ao amin'ny Ivotoerana manoratra University of University of Utah (UVU). Kelsey dia ny Representative State of Utah ao amin'ny tabilao RMWCA ary efa nanompo tao amin'ny birao MAWCA ary koa mpiara-miasa amin'ny famoahana Ny famerenana ny peer. Ny fahalianany amin'ny fikarohana dia misy ny fianarana ivon-toerana fanoratana, famindrana ny fianarana, ny fironana amin'ny fanoratana, ary ny fahamarinana ara-tsosialy amin'ny foibe fanoratana sy ny efitrano fianarana. Ny famoahana vao haingana dia misy ny "Mampianatra tutors: fahombiazan'ny tena sy ny fifandraisana misy eo amin'ny fampianarana sy ny fanoratana," (Ahoana no ampianarantsika ny mpampianatra mpanoratra: A WLN Fanangonana Digital Edited) ary “Matoky tena sa tsy matoky tena loatra? Sombin-tsary kely momba ny fanoratan'ny mpampianatra sy ny fahaizany mampiana-tena, ”(Praxis: Gazety ivavahana fanoratana). Kelsey dia nahazo ny Ph.D. avy amin'ny Indiana University of Pennsylvania sy ny MA ary BA avy amin'ny Kansas State University. Ankoatry ny fianarany akademika, nandany ny fandaniany fotoana i Kelsey, nizaha ny zava-drehetra momba ny zavakanto, nilalao lalao amin'ny paikady, ary nandany fotoana niaraka tamin'ny sakaizany, ny zazakely ary ny mpiandry ondry collie / border collie.
Joseph Cheatle dia talen'ny foibe fanoratana sy haino aman-jery ao amin'ny Iowa State University any Ames, Iowa. Izy dia talen'ny Associate Director an'ny The Writing Center tao amin'ny State University Michigan ary niasa ho mpanolotsaina matihanina amin'ny Case Western Reserve University ary mpanolo-tsaina mpianatra nahavita fianarana tao amin'ny University Miami. Ny tetikadiny fikarohana ankehitriny dia mifantoka amin'ny antontan-taratasy sy ny tombana amin'ny foibe fanoratana; indrindra izy dia liana amin'ny fanatsarana ny fahombiazan'ny fomba fanaovan-taratasy ankehitriny mba hiteny amin'ny fomba mandaitra kokoa sy amin'ireo mpihaino marobe. Izy dia tao anatin'ny ekipa mpikaroka nijery antonta-taratasy momba ny foibe fanoratana nahazo ny Association International Centres Centres Association Miavaka
Neisha-Anne S Green (Oniversite Amerikanina) dia mpiara-miasa ho an'ny Fianarana ho an'ny Frederick Douglass Distinguished Program ary talen'ny serivisy ho an'ny mpianatra ho fanohanana ny mpianatra ary ny foibe fanoratana ao amin'ny American University any Washington, DC. Izy dia niasa ho mpanolo-tsaina amin'ny asa soratra, mpandrindra tutor, talen'ny mpanampy ary talen'ny mpiara-miasa. Mampianatra amin'ny kilasy American University Experience 2 izy izay mampiavaka ny Oniversite Amerikanina. Ity kilasy ity dia noforonin'ny mpampianatra, mpiasa ary mpianatra AU ho antso ho amin'ny hetsika mba hahazoana antoka fa ny fahasamihafana, ny fampidirana, ny fahalalahana maneho hevitra ary ny fahalalahana maneho hevitra dia ao anatin'ny fandaharam-pianarana fototra. any Barbados sy Yonkers, NY. Mpiara-miasa foana izy manadihady sy mijery ny fampiasana ny tenin'ny tsirairay ho loharanom-pahalalana izay mihatsara kokoa amin'ny fitenenana ho an'ny tenany sy ny hafa. Navoaka tao amin'ny fampiharana ary The Writing Center Journal; manana toko amin'ny boky ho avy izy ao amin'ny Teôria sy fomba fiasa amin'ny ivontoerana fanoratana: Torolàlana azo ampiharina, Ivotoerana fanoratana eo anelanelan'ny olona: Feo avy amin'ny fanoherana ary Fomba isan-karazany amin'ny fampianarana, fianarana ary fanoratana manerana ny fandaharam-pianarana: IWAC amin'ny faha-25. Nanome fehezan-teny fototra ao amin'ny IWCA, IWAC ary ny Fikambanana Ivotoerana manoratra any Baltimore izy. Neisha-Anne koa dia miasa amin'ny bokiny Songs From A Caged Bird.
Elizabeth Boquet (Oniversite Fairfield)dia profesora anglisy ary talen'ny ivon-toerana fanoratana ao amin'ny oniversite Fairfield any Fairfield, CT. Izy no mpanoratra an'i Na aiza na aiza akaikin'ny tsipika ary Tabataba avy amin'ny foibe fanoratana ary mpiara-manoratra Ny foibe fanoratana isan'andro: vondrom-piaraha-miasa, navoakan'ny Utah State University Press. Izy dia nanompo fe-potoana roa ho mpiara-tonian-dahatsoratry ny The Writing Center Journal, ary izy dia mpandray indroa ny mari-pahaizana iraisam-pirenena momba ny fikarohana iraisam-pirenena. Ny vatsim-pianarany dia nipoitra tamina gazety maro sy fanangonana natetika, ao anatin'izany English English, Composition sy fifandraisana amin'ny oniversite, The Writing Center Journal, ary WPA: Fitantanana programa fanoratana. Ny tsy famoronana noforoniny dia navoaka tao amin'ny Tantara amin'ny teny 100, Olona efa lehibe, The South Africa, ary Fandraisana an-trano maty.